Izinsizakalo Zokuhlanza Uhlu Lwama-imeyili Nenhlanzeko: Kungani Udinga Eyodwa nokuthi Ukhetha Kanjani | Martech Zone
Ukuqinisekiswa Kohlu Lwekheli Le-imeyili Enqwaba, Ukuqinisekisa, Nokuhlanza
NgoLwesihlanu, Mashi 5, 2021 UMsombuluko, May 16, 2022 Douglas Karr
Ukumaketha nge-imeyili kungumdlalo wegazi. Eminyakeni engama-20 edlule, ukuphela kwento eshintshiwe nge-imeyili kuhle lokho abathumeli be-imeyili bayaqhubeka nokujeziswa kaningi ngabahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili. Ngenkathi ama-ISPs nama-ESPs bekwazi ukuhlanganisa ngokuphelele uma befuna, bamane nje abakwenzi. Umphumela uba ukuthi kukhona ubudlelwane obuphikisayo phakathi kwalaba bobabili. Abahlinzeki Bezinsizakalo ze-Inthanethi (ISPs) bavimba abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili (i-ESPs)… bese ama-ESP aphoqeleka ukuvimba amaklayenti.
Uma ama-imeyili akho angaphezulu kuka-10% amabi, kulethwa okungaphansi kuka-44%!
Akulula njengokungena kabili embonini. Amasayithi afana nelethu asebenza nabalingani emikhankasweni eyabiwe nabathengisi namakhasimende. Asibaniki ukufinyelela kuhlu lwethu, kepha izikhathi eziningi siqoqa amakheli e-imeyili ndawonye ukuze senze imikhankaso. Lokho kube yikhanda elikhulu. Abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili abanendaba nendlela yakho yokungena noma umzila wakho wokucwaningwa kwamabhuku; bamane bacabange ukuthi ugaxekile.
ESPs like I-Mailchimp have implemented intelligence on email addresses in a system called I-Omnivore. Ngo-Omnivore, iMailchimp yathumela izexwayiso ezingama-50,000 45,905 futhi yavala ama-akhawunti amabi angama-XNUMX XNUMX ngonyaka owodwa kuphela. Bangakhuthaza iqiniso lokuthi lawo ma-akhawunti ayenonya… Ngingasho ngithi amaningi awo ayeyizinkampani ezithumela ohlwini lwawo futhi engasebenzisi izindlela ezinhle kakhulu.
Ngokusho kweJupiter Research, ngaphezu kwamaphesenti angama-20 wokubhaliswa kwe-imeyili aqukethe typos, syntax, isizinda namanye amaphutha. Ukwenza okuthile okulula njengokuthumela ohlwini oludala lapho umkhawulo othile wamakheli e-imeyili ugxuma ungabeka umkhawulo wabo. Lokho akulona ubungozi. Ingasaphathwa eyokuthi ama-bots ngaphandle acindezele amakheli e-SPAM abamba ama-imeyili ngokusebenzisa amasistimu nsuku zonke ukuzama ukukubamba. Okuxakayo, ngombono wami, ukuthi ngikholelwa ukuthi kulula ukuthi uSIPAMI afake i-imeyili ebhokisini lakho lokungenayo kunenkampani ejwayelekile ethumela umyalezo ovumelekile.
Abahlinzeki Besevisi ye-imeyili abathembekile kakhulu ngamanani abo wokuletha, noma Imvamisa, bazokwenzela i- 99% isilinganiso sokulethwa, kepha ukuphrinta okuncane kusho ukuthi ngemuva kokuthunyelwa kwe-imeyili okumbalwa. Yebo, duh ... owokuqala uthumela ukuthwebula amakheli e-imeyili angavumelekile! Isilinganiso sokwamukelwa okujwayelekile kwe- Isikolo Sender ka-91 ​​noma ngaphezulu angama-88%. Ukuba no-1% wohlu lwakho kubi kunganciphisa ukuletha kwakho ngaphezulu kwe-10%!
Ngokujabulisayo, zikhona ukuqinisekiswa kwe-imeyili kanye nohlu lwabahlinzeki benhlanzeko emakethe oqoqa ubuhlakani futhi azokusiza ukuthi uhlanze uhlu lwakho ngaphambi kokubanjwa kulolu bishi. Khumbula ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kwe- ukuqinisekiswa kwe-imeyili kuqhathaniswa nezinsizakalo zokuqinisekisa i-imeyili. Ukuqinisekiswa kwe-imeyili kuqinisekisa ukuthi ikheli le-imeyili lakhiwe kahle, ngenkathi ukuqinisekiswa kwe-imeyili kusebenzisa izindlela ukubikezela amathuba okulethwa.
Kungani Udinga Ukuhlanzwa Kohlu Lwama-imeyili?
Ukuhlanzeka nge-imeyili kuyisinyathelo esidingekayo ekubeni nohlelo olukhulu lokulethwa kwe-imeyili nokugcina idumela elihle lomthumeli. Nazi izimo ezi-4 lapho ukuhlanzwa kohlu lwe-imeyili kuyisidingo:
Ukufuduka - Uma uthuthela kumhlinzeki omusha, ukuhlanzwa kohlu lwe-imeyili kuyisinyathelo esibalulekile ku- Isu lokufudumala le-IP.
Ukubekwa Kwebhokisi Lemilayezo Engenayo Eliphansi - Ama-imeyili akho kungenzeka ukuthi aya ngqo kufolda engenamsoco ngoba uhlu lwakho lunezicupho eziningi kakhulu zogaxekile futhi luthumele amakheli e-imeyili kulo.
Amanani aphansi avulekile - Uma ungalinganisi isilinganiso sakho sokubekwa kwebhokisi lokungenayo futhi unamazinga aphansi avulekile, ama-imeyili akho kungenzeka ukuthi aya kufolda engenamsoco ngenxa yezicupho eziningi zogaxekile namakheli e-imeyili akhishwe.
Ukuzibandakanya kabusha - Uma unohlu ongaluthumelanga ezinyangeni, uzofuna ukuhlanza uhlu ukugwema i-spike kuma-bounces angathinta amazinga akho wokuletha.
Ungayikhetha Kanjani Insizakalo Yokuhlanza Uhlu lwe-imeyili
Leli khasi selidume ngendlela eyisimanga, ngakho-ke sifuna ukuqinisekisa ukuthi sinikeza ukuholwa okuthile ekukhetheni umhlinzeki nokuthi kungani sihlukanise uhlu olungezansi lwaba izinsizakalo zokuhlanzeka zohlu lwe-imeyili. Izincomo zethu bezisuselwa kokulandelayo:
Imigomo - ingabe insizakalo inemigomo nenqubomgomo yobumfihlo ekhona eqinisekisa ukuthi ayithengisi futhi ayikhiphi amakheli akho e-imeyili kunoma yimuphi umuntu wesithathu?
Transparency - ingabe insizakalo ibhaliswe ngokusobala ku-inthanethi nemininingwane yokuxhumana nobunikazi besizinda sabo, indawo yebhizinisi labo, nemininingwane yokuxhumana nabo? Ngabe ibhizinisi liyisikhala sehhovisi esizinikele (hhayi i-PO Box noma ihhovisi elabiwe)?
Amaprosesa asekelwe - noma ngabe inkampani inezindlela zokuxhumana nabo nge-imeyili, ifomu lokuxhumana, noma inombolo yocingo futhi ngabe kukhona owaphendula isicelo.
Ukuhlanganiswa - Ukucubungula ngobuningi amakheli e-imeyili kuyinto eyodwa, kepha uma ukwazi ukuhlanganisa zonke izinhlelo zakho namaphuzu wokungena lapho uqoqa khona amakheli e-imeyili, leyo yinqubo esebenza kahle kakhulu.
API - banayo i-API ebhalwe kahle lapho ungahlanganisa khona amapulatifomu akho ngqo nabo?
Compliance - noma ngabe inkampani ihlala ezweni elinemithetho yobumfihlo efana ne-GDPR noma umthetho wokuthobela ogaxekile nge-imeyili.
Uhlu Lwama-imeyili Oluxhasa Umxhasi:
Ukuqinisekiswa kwe-imeyili, ukuhlaziywa nokuhlanzwa kohlu kwenzelwe abantu abafuna ithuluzi elisheshayo nelinokwethenjelwa ngaphandle kwazo zonke izingxabano nama-upsell. Izinyathelo ezilula ezi-3 zokwandisa uhlu lwakho.
Isilinganiso sokulethwa esiqinisekisiwe esingu-98% + ngohlu lwakho lwe-imeyili oluqinisekisiwe.
Izinketho zokulanda uhlu lwakho olusha nemibiko ekhethekile.
24 / 7 yenethiwekhi nabantu bangempela ngakolunye uhlangothi ukusiza.
Faka uhlu lwakho lwe-imeyili
Abahlinzeki Bokuhlanza Uhlu Lwama-imeyili Nenhlanzeko
Nakhu ukuqinisekiswa okuhola phambili kwe-imeyili kanye nohlu lwezinsizakalo zokuhlanzeka. Konke lokhu kufaka ipulatifomu eku-inthanethi lapho ungadingeki ukuthi uxhumane nethimba lokuthengisa futhi bonke banemigomo ekusetshenzisweni kwedatha, bayabonakala, futhi baphendule ngenkuthalo kuzicelo zokusekela:
Ukusetshenziswa kwalezi zinsizakalo zenhlanzeko kunga thuthukisa iphesenti lama-imeyili lokho kungena ebhokisini lokungenayo, ukunciphisa ingozi yokuba uvinjelwe abahlinzeki Besevisi Ye-Inthanethi, futhi ukunciphisa ingozi yokuxoshwa ngumhlinzeki wakho we-imeyili… bakufanele utshalomali uma unohlu oludala noma usebenzisana kulolo. Hlala wazi ukuthi awusoze wafinyelela ukunemba okungu-100% kuhlu lwakho. Abantu bashintsha imisebenzi nabahlinzeki kaningi, beshiya amakheli abo amadala e-imeyili.
Iningi lalaba bahlinzeki linikela nge- API ukuze ukwazi ukuyihlanganisa nenqubo yakho yokutholwa.
Ama-Aeroleads - thola ama-imeyili ebhizinisi nezinombolo zocingo zamathemba. Banesandiso se-chrome futhi.
Umshayeli - Hlanza uhlu lwakho lwe-imeyili ngesihloli se-imeyili esithembekile. Ithuluzi lokuqinisekisa i-imeyili elisebenziseka kalula kanye nethuluzi lokuhlanza uhlu likusiza ukuthi ugcine ukuxhumana futhi ufinyelele kumuntu wangempela kalula nangokushesha.
BriteVerify - (manje okuyingxenye yamandla) amathuluzi owadingayo ukuze ususe ama-imeyili angavumelekile kwimininingo egciniwe yamakhasimende akho, imikhankaso yokuthengisa nge-imeyili, noma izincwadi zezindaba eziku-inthanethi futhi uzigcine zikhona. Ungahudula ulahle ifayela kalula, wabelane ngefayela ngefu, bese uthola ukubikwa okuningiliziwe ohlwini lwakho ngaphandle kokuxhumana nenkampani. Futhi bane- API uma ungathanda ukuhlanganisa ukuqinisekiswa kwe-imeyili yakho nabo!
Ukususwa - Lesi siqinisekisi se-imeyili esiningi senza ukuba ulayishe i-database ye-imeyili futhi uhlanze uhlu lwakho lwe-imeyili ngokuchofoza okukodwa.
I-DeBounce - Isevisi ye-DeBounce ikuvumela ukuthi ulayishe futhi uqinisekise uhlu lwamakheli e-imeyili ngokushesha nangendlela ephephile.
Isihloli se-imeyili - Ikhomba amakheli we-imeyili omgunyathi noma angavumelekile.
Isihloli se-imeyili - (okuhlukile kunaphezulu) I-imeyili Checker ingenye yamaphayona okuqala emkhakheni wokuqinisekisa i-imeyili, isiza ukuthuthukisa ukuhanjiswa kokuxhumana kwe-imeyili.
I-Qualityan Data Quality - Isixazululo sokuqinisekisa i-imeyili esikhomba khona manjalo ukuthi ikheli le-imeyili livumelekile yini nokuthi liyathunyelwa yini.
I-FreshAddress isiza izinkampani ezincike kwi-imeyili ukushayela imali ngokwakha, ukuvuselela, ukuhlukanisa, nokuhlanza uhlu lwazo lwe-imeyili.
OkungaqondakaliIpulatifomu yezobunhloli yedatha isuselwa kuzisetho zomthetho eziqhutshwa inqubomgomo kanye nama-algorithms wokuskena wangempela wesikhathi asebenzisa indlela enezingqimba eziningi ukukhomba, ukuqinisekisa, nokuvikela ezinhlobonhlobo zezinsongo ezincike kuma-imeyili.
ikhompyutha - Ngokushesha nangokungazami qinisekisa futhi uqinisekise amakheli e-imeyili nezizinda ukuqinisekisa ukunemba kwawo ngaphambi kokuchitha isikhathi, amandla nemali ngokungadingekile, ukwandisa ukulethwa kwemiyalezo yakho ngama-90%.
I-Kickbox - I-Kickbox iqinisekisa ukuthi uthumela kuphela ama-imeyili kubasebenzisi bangempela futhi ikusiza ukuthi uhlukanise amakheli ekhwalithi ephansi koxhumana nabo benani eliphezulu. Vikela isithunzi sakho, wandise amanani avulekile, futhi wonge imali ngeKickbox.
I-MailerCheck - Ukuqinisekiswa kwe-imeyili, ukuhlaziywa, kanye nohlu lokuhlanza olwenzelwe abantu abafuna ithuluzi elisheshayo nelinokwethenjelwa ngaphandle kwayo yonke impikiswano nama-upsell. Izinyathelo ezilula ezi-3 zokwandisa uhlu lwakho.
Isicoci seMillion - Ukuqinisekiswa kwe-imeyili ngokunemba okuphezulu okuqinisekisiwe namanani akhokhelekayo.
Ungalokothi Bounce isusa amakheli e-imeyili angavumelekile futhi yehlisa ngokumangazayo amazinga e-bounce jikelele wokulethwa kokugcina.
Ubufakazi - Qinisekisa ngokushesha futhi uqinisekise uhlu lwakho lwe-imeyili. Isihlangu semfihlo se-EU-US.
TheChecker - Abachwepheshe abangu-1,000 80 abavela emazweni angama-XNUMX + bathembele ekuqinisekisweni kwe-imeyili yethu ngobuningi kanye nohlu lokuhlanza uhlu lwama-imeyili.
ITowerData - Khulisa ukulethwa kwebhokisi lakho lemilayezo engenayo ngokuhlanza uhlu lwakho lwe-imeyili lwamakheli we-imeyili angavumelekile futhi enobuqili.
Xverify - Yazi ukuthi uthumela i-imeyili i-akhawunti engeke igxume I-Xverify ingaqinisekisa amakheli e-imeyili ngesikhathi sangempela nange-batch.
I-Webbula - I-imeyili inhlanzeko kanye nezinsiza zokuthuthukisa idatha.
Eminye Imisebenzi Yokuqinisekisa nge-imeyili eku-inthanethi
Nazi ezinye izinsizakalo zokuqinisekisa i-imeyili nezenhlanzeko zazingenazo zonke izinkomba zokuthembela wezinkampani ezingenhla.
Ampliz - I-Ampliz iqinisekisa amakheli akho e-imeyili wamakhasimende ngesikhathi sangempela futhi ikusiza ukuthi ugcine inhlanzeko ye-imeyili eletha isilinganiso esikhulu sokuphendula. Lesi sizinda sibhaliswe naku- Okungenazihibe insiza. I-Bounceless izohlanza uhlu lwakho lwe-imeyili ngokuthola ama-imeyili angaqinisekisiwe, izingibe zogaxekile, nezizinda ezilahlwayo.
I-Antideo - Isevisi ye-API Validation API yokususa amakheli we-imeyili alahlwayo / wesikhashana, ama-imeyili ogaxekile, njll, ukugcina uhlu lwakho luhlanzekile.
Vimba amakheli e-imeyili alahlwayo - Thola futhi uvimbe okulahlwayo, okukodwa, ukulahla, amakheli e-imeyili wesikhashana.
Isiqinisekisi se-imeyili Esibanzi - uhlelo lokusebenza lewebhu elingaqinisekisa ukuthi ikheli le-imeyili lingokoqobo noma liyimbumbulu. Noma ngubani othumela ama-imeyili njalo angazuza ngokusebenzisa uhlelo.
UCaptainVerify - hlola & uhlanze uhlu lwakho lwamakheli ngokushesha. Hudula bese uphonsa ifayela lakho kuthuluzi lethu bese senza okunye. Simple, fast and evikelekile.
UkuhlanzaTheList.com - Ukuhlanzwa nokuqinisekiswa kwama-imeyili.
ImininingwaneOut - Thola ikheli lomuntu siqu le-imeyili kanye nenombolo yocingo
IdathaValidation – Validate your email list fast. Link a Mailchimp or Ukuxhumana okuqhubekayo akhawunti ngokuqapha okuqhubekayo kanye nokugcinwa kohlu.
Isimakiseli se-imeyili - I-Emailmarker ikusiza ukuhlunga ama-imeyili asezingeni eliphansi koxhumana nabo benani eliphezulu. Siqinisekisa ukuthi uthumela i-imeyili kuphela kubasebenzisi bangempela futhi uvikele idumela lakho, Thuthukisa umkhankaso wakho we-imeyili, futhi wonge imali nge-Emailmarker.
maphisi iyinkampani yokuqinisekisa i-imeyili efanelekile. Basusa ama-bounces, izinsongo, ababhikishi, abamele amacala, nazo zonke ezinye izingozi ezibonakalayo kulwazi olubhalisile. IHygienics inikeza isikhathi sangempela API amapulatifomu asetshenziswa nsuku zonke ababhalisile emhlabeni jikelele.
Izimpendulo ze-imeyili - ukuvikeleka kohlu lwe-imeyili kanye nensizakalo yokuqinisekisa ezokhuhla, ihlanze, iqinisekise futhi iqinisekise imininingwane yakho ekhona yekheli le-imeyili.
ImeyiliHippo - I-imeyili yokuqinisekisa isevisi eku-inthanethi yabathengisi abangochwepheshe namakhasimende abo
I-imeyiliInspector - Hlanza futhi ususe amakheli e-imeyili angavumelekile ohlwini lwakho lokumaketha
Uhlu lwe-imeyili Qinisekisa - Uhlu lwe-imeyili oluqinisekisiwe lukuvikela ezinhlamvini ngokunikeza isisombululo sokuqinisekisa se-imeyili esibanzi kunazo zonke emakethe, uqiniseke ukuthi uhlu lwakho lwe-imeyili alunamabhampa, lusebenza futhi luletha i-ROI ephezulu.
Thumela i-imeyili YoYo - Izixazululo zokuhlanza zokuqinisekisa i-imeyili.
Isiqinisekisi se-imeyili - Nge-Byteplant Real-Time Online imeyili Validator ungaqinisekisa kalula ukuthi ikheli le-imeyili likhona futhi livumelekile.
UKlemail - I-Klemail ikuvumela ukuthi uhlole ukuthi ama-imeyili owathumelayo akhona yini. Vikela idumela lesizinda sakho futhi wandise isilinganiso sakho esivulekile.
UhluWise - Sihlaziye imiphumela yamakhulu ezigidi zamakheli e-imeyili esiwahlanzile ukuklama injini entsha yokuhlanza uhlu lwama-imeyili enamandla amakhulu kunakuqala. Zama i-ListWise II mahhala futhi uthathe ukusebenza kwakho kokumaketha kwe-imeyili kukuphakeme okusha
Ibhokisi lemeyiliValidator - Ixhuma kuseva yeposi bese ibheka ukuthi ibhokisi leposi likhona noma cha
Ukuhlolwa Kweposi - Iqinisekisa ama-imeyili nezingcingo kusetshenziswa ukuxhumana nomphakathi
IMastersoft Group - igxile kudatha yase-Australia
Ukuqinisekiswa Kwe-imeyili Okusheshayo - Insiza esekwe kuwebhu ukuqinisekisa amakheli e-imeyili ngobuningi noma ngesikhathi sangempela usebenzisa i-REST API. Bathola ama-imeyili angavumelekile futhi angasebenzi futhi bakunikeze umbiko ophelele onemininingwane.
I-SiftLogic - Ukuqinisekiswa kwe-imeyili nokulinganisa ukusiza ukubekwa kwebhokisi lokungenayo nokukhulisa idumela lomthumeli.
USnovio - I-Cold outreach automation - thola, uqinisekise, futhi uthumele amathemba e-imeyili nge-Snovio ngamazinga wokuguqulwa angcono.
I-Truemail - Ukuqinisekiswa kwe-imeyili. Easy, Fast & eshibhile. Hlanza uhlu lwakho lwamakheli bese ukhuphula izinga lokulethwa kwakho kufika kuma-99%. Inqubo yokuqinisekisa ikheli le-imeyili yayingakaze ibe lula kangako.
I-Verifalia - I-Verifalia iyinsizakalo yokuqinisekisa i-imeyili ekuwebhu ekuvumela ukuthi ulayishe futhi uqinisekise uhlu lwamakheli e-imeyili kalula futhi kalula.
Ukudalula: Asithwali isibopho sempumelelo yakho ekukhetheni oyedwa walaba bahlinzeki, besifuna nje ukuhlinzeka ngohlu oluphelele ngabaqinisekisi bokuthembela abengeziwe. Sisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo ngaphakathi kwalesi sihloko.
Tags: I-Act-OnUmkhankaso Osebenzayoumugqa osebenzayoama-aeroleadsI-Agile-CrmAma-Aiva-Labskhulisai-autopilotAWeberI-BombBombbounce-ngenamaliBriteVerifyBrontoUmkhankaso WokumkhankasoucaptainifyUmaki wokuhlolauhlu oluhlanzekilehlanza uhluCleverreachChofozaFunnelsAmafomu we-CognitoUkuxhumana okuqhubekayooxhumana nayeGuqulaKukhethiweukuqinisekiswa kwedathaIdathaValidationDEAukuhanjiswaIkheli le-imeyili elilahlwayoUkutholwa kwekheli le-imeyili okungalahlwaukuvuzamaphisiikheli le-imeyiliinhlanzeko yekheli le-imeyiliizimpendulo ze-imeyiliokuhlola i-imeyilii-imeyili yokuhlanza i-apiukukhishwa kwe-imeyiliimvubu ye-imeyiliinhlanzeko ye-imeyiliUhlu lwe-imeyili qinisekisaukuqinisekiswa kwe-imeyiliisiqinisekisi se-imeyiliukuqinisekiswa kwe-imeyilii-imeyili yokuqinisekisa apiimeyili yoyoi-imeyiliespisipiliyoniI-FormdeskAmafomuI-FreshAddressI-FulcrumgdprUkulawulwa kwe-GetsitecontrolI-Google-AmafomuHighriseindawoihubucoIContactIcontact-Prongokungaqondakaliukubekwa kwebhokisi lokungenayoUkuqondisisaUkufakaintercomispJotFormi-imeyili engenamsocoukuhlunga i-imeyili okungenamsocoibhokisi lokukhahlelaAma-Kickofflabsklemailukuhlanza uhluukuhlanzwa kohluuhlu lwezempiloisihloli seposii-mailchimpI-Mailerlitei-mailjetUkuthunyelwa ngeposiumabhebhanaI-MoosendI-Nocrmioifomu lephephaAmandlaubufakazifunga.ioqasI-Qualarooukuqinisekiswa kwe-imeyili okusheshayoUkuhlola okusheshayoI-Referral-RockRFC 1035RFC 1123RFC 2822RFC 5321I-RFC 5322 RFC 2821RFC 6531i-salesforce pardotidumela lomthumeliI-SendgridI-SendpulseThumelaisibabaloI-SmartemailingI-Smartsurveybusheleleziugaxekileisicupho sogaxekileogaxekile amakheli e-imeyiliI-SparkPostsitholeInhlolovo-Noma yikuphiamakheli we-imeyili wesikhashanaumabhebhanaminqeleumabhebhanauhlobounbounceqinisekisa uhlu lwe-imeyilimzwandileqinisekisa i-imeyiliimpendulo eqondileukuphenduka mpoumbono6I-WooboxawuamabombozapperzendeskI-CRM ye-ZohoAmafomu we-Zoho
Inganekwane ye-SEO: Ingabe Kufanele Ubuyekeze Ikhasi Elibekwe Kakhulu?
Ngo-Apr 25, i-2014 ku-10: 49 AM
Ukubuka konke okuhle, uDoug. Kubalulekile ukuqaphela, noma kunjalo, ukuthi
ukugwema nokunqoba izinkinga zokulethwa kwe-imeyili kudinga okuphelele
inhlanzeko ye-imeyili, ukulungiswa, kanye nensizakalo yokuqinisekisa ngokungafani ne- “pinging” emane
(okusho amasheke e-SMTP) iningi labathengisi abasohlwini lwakho abanikezayo. Ukuhlolwa kwe-SMTP kunikeza kuphela imininingwane ku
noma ngabe ikheli le-imeyili lilethwa ngesikhathi esithile kanye nokunemba kwe-
le miphumela isashiya okuthandekayo njengoba ama-ISP amaningi enza noma yini angayenza
ukudumaza lo mkhuba. Ngaphezu kwalokho, ama-bounces awasona isishayo se-imeyili
Abakhangisi njengoba cishe zonke izinkampani ziwela kahle ngaphansi kwemingcele evunyelwe
Izinkinga ezinkulu kakhulu ezibhekene nazo
abathengisi be-imeyili bavela kumakheli we-imeyili anenkinga (isib. izingibe zogaxekile, ama-honeypots
izikhalazo zogaxekile ezisindayo, amakheli amabi, njll.) kumafayela awo kanye nokungazi
amaphutha enhlanzeko njengoba lawa makheli ahambisekayo kuyilawo Spamhaus futhi
ezinye izinhlangano zokuhlunga ogaxekile zisebenzisa ukukhipha ogaxekile futhi zisheshe futhi
Ukuhlala kude ne-radar ye-
izinhlangano zokuhlunga ogaxekile futhi ngaleyo ndlela zenze ukuhanjiswa kwakho kube ngcono futhi
izimali ezingenayo, umuntu udinga ukusebenza ngenhlanzeko ye-imeyili, ukulungiswa, nokuqinisekiswa
1) Vimba inkinga
amakheli ekungeneni ku-database yakho bese uhlanza lawo anayo
isivele ifikile lapho
2) typos elungile futhi
amanye amaphutha enhlanzeko njengoba uSpamhaus ephendulele abaningi abenziwe ngokuthayipha njalo
3) Qinisekisa i-
ukuhanjiswa kwekheli ngalinye le-imeyili ngokubhekisisa okuqondene ne-imeyili
umsebenzi (isb. kuvula, ukuchofoza, ukubhampa, izikhalazo zogaxekile, njll.), umlando
ingobo yomlando yokuhlolwa kwe-MX ne-SMTP, nokuhlolwa kwesikhathi sangempela kwe-SMTP.
Izindleko zensizakalo engenhla
iqala kupenny ngekheli le-imeyili bese yehla kakhulu ngevolumu
ukwanda. Ngaphezu kwalokho, gwema noma yikuphi
umhlinzeki wesevisi insizakalo yakhe engatholakali ngesikhathi sangempela, iqoqo elizenzakalelayo
(isb. 24x7x365), nemodi yebatch yesevisi ephelele, efaka phakathi imanuwali
Uma ubheka ukuqinisekisa
imizamo yakho yokumaketha i-imeyili ifinyelela i-ROI ehamba phambili ngobuncane be
izindleko, ubunzima, nezingozi, ukubambisana nenkampani yokuhlanzeka nge-imeyili kuzofakazela
ukuze ube utshalomali oluncane kakhulu ongalwenza.
Ngemininingwane eminingi yokuthi ama-25% we
izinkampani zeFortune 100 kanye nezinkulungwane zabakhangisi, ezinkulu nezincane, zikhona
Ukugcina imininingwane yabo ye-imeyili ihlanzekile futhi isesikhathini, niyabo http://www.freshaddress.com/services/email-validation/
Okthoba 8, 2014 ngo-2: 32 AM
Sawubona Doug no-billkaplan,
Ungabona futhi http://www.mailboxvalidator.com yensizakalo yokuhlanza uhlu lwama-imeyili.
Mar 20, 2015 ku-11: 55 PM
I-Webbula.com kungenye inkampani okufanele uyihlole. Banikeza inhlanzeko nokuqinisekisa
Mar 22, 2015 ku-3: 35 PM
Kungeziwe, ngiyabonga Scotty!
Ngo-Apr 23, i-2015 ku-4: i-46 PM
Siyabonga ngamathiphu, uma noma ngubani efuna ukufunda kabanzi ngokuthenga noma ngokuhlanza i-database yakhe ye-imeyili yokumaketha, bheka lo mhlahlandlela: http://bit.ly/1Ka27Hh
Jul 26, 2015 ngo-8: 19 PM
Wake wazama http://www.bulkemailchecker.com ? Ngizamile izinsizakalo ezimbalwa ohlwini lwakho futhi ngemuva kokunganeliseki ngemiphumela noma ngentengo, ngiqhubekile nokusesha kwami ​​ngathola i-Bulk Email Checker. Ngingasho ngobuqotho ukuthi ukusesha kwami ​​insizakalo yokuqinisekisa i-imeyili enamanani aphansi kuphelile. Bengizisebenzisa ezinyangeni ze-4 ezedlule futhi bengingeke ngijabule ngokwengeziwe. Zihlole futhi ngethemba lokuthi nawe ungamisa ukusesha kwakho!
Ngiyabonga uDoug, nibe nempelasonto enhle!
Jul 27, 2015 ngo-12: 59 PM
Sep 23, 2015 ngo-3: 34 PM
Njengamanje ngisezinhlelweni zokufuna inkampani ezoqinisekisa uhlu lwami futhi bengifuna ukuthola ukuthi kungani unganelisekile ngabanye babahlinzeki? Ngimusha kulokhu futhi kuyakhathaza ukudlula kumawebhusayithi amaningi ukuthola ukuthi yini ewenza ahluke. Ngakho-ke uma kungenzeka wabelana ngokuthi kungani unganelisekile ngabanye nokuthi kungani ukhetha i-Bulk Email Checker ngaphezu kwawo wonke amanye amasayithi. Lokhu kuzongisiza futhi mhlawumbe nabanye abaningi abafunde lokhu. Ngiyabona ukuthi amanani angcono kakhulu ku-Bulk Email Checker kodwa futhi ngingathanda nokwazi ezinye izinto mhlawumbe ezizenze zibe ngcono. Ngiyabonga kusengaphambili ngokuphendula.
Sep 24, 2015 ngo-4: 17 PM
Sawubona Simone, sekuvele kunezingozi ezihlobene nokusebenzisa uhlu oludala noma uhlu lokuthenga. Abahlinzeki bezinsizakalo ze-imeyili, ikakhulukazi, badelela noma iyiphi inkampani engenisa amakheli e-imeyili angakahlolwa. Futhi Abahlinzeki Bezinsizakalo ze-Inthanethi abamukela i-imeyili bazoguqula ngokuphelele yonke i-imeyili yakho noma bavimbe umhlinzeki wakho uma iningi lalawo makheli e-imeyili lishaya noma libika i-imeyili njengo-SPAM. Njengomphumela, ukusebenzisa ithuluzi lokuqinisekisa uhlu kubalulekile lapho uhambisa amakheli e-imeyili wamakheli afanele e-imeyili. Uma usebenzisa ithuluzi elingalungile, uzibeka engcupheni yokuvinjelwa i-ISP bese uxoshwa kumhlinzeki wabo we-imeyili.
Sep 1, 2015 ngo-11: 27 PM
Ngiyabonga ngohlu !! Nginombuzo. Ngifuna ukuqala insiza yami yokuhlanza i-imeyili. Ungancoma noma iyiphi isoftware enhle ongayithenga. Ngibuke ngingenayo inhlanhla kuze kube manje. Ngiyifuna izenzekele ngangokunokwenzeka. Ngiyabonga
Sep 2, 2015 ku-10: 40 AM
Sawubona Josh, angazi noma yini engekho, kepha mhlawumbe enye yezinsizakalo ezibalwe lapha ine-API noma inikezela ngesixazululo seWhite Label. Lokho kuzokuvumela ukuthi ubeke uphawu kusixazululo njengesakho.
Sep 16, 2015 ku-3: 26 AM
Indlela elula yokubheka ikheli le-imeyili ledatha, Isihloli se-imeyili esithuthuke kakhulu. Ubufakazi.io.
Sisekuhlolweni kwe-beta manje kepha sinendlela yokuhlola enembe kakhulu.
Sidinga impendulo. Ungathola ukuhlinzeka ngemali ethile yokuhlola insiza.
Sep 17, 2015 ngo-1: 20 PM
Sazise uma uphelelwe i-beta futhi sizokungeza kuhlu lwabahlinzeki!
I-Oct 13, i-2015 ku-2: i-35 PM
Ngisanda kuya kusayithi lakho ukuyohlola izinsizakalo zakho noma kunjalo - ayikho inombolo yocingo. Akunakwenzeka ukuthi noma ngubani angavele alayishe uhlu lwababhalisile kusayithi lakho ngaphandle kokuthinta isisekelo nomphathi we-akhawunti noma othile ukuqinisekisa ukuthi anginikezi nje ababhalisile bami emthonjeni ongaziwa.
I-Oct 13, i-2015 ku-4: i-58 PM
Uma uchofoza ku-Inikwe amandla yi-Neverbounce, uzobona inombolo yabo yocingo kubha yabo yokuzulazula.
Nov 5, 2015 ngo-7: 27 AM
Sawubona Douglas. Ngimangele kancane ukuthi awuzange usho iVerifalia ohlwini lwakho. Hhayi nje ukuthi ibonakala ingomunye wabahlinzeki bokuqinisekisa ama-imeyili eYurophu kepha futhi inikela ngezici ezihlukile engingazibonanga kwenye indawo, kufaka phakathi ukusekelwa kwamakheli e-imeyili angasebenzisi izinhlamvu zesiLatin (sinamakhasimende amaningi ohlwini lwethu kusuka ISingapore, iJapane neSaudi Arabia, ngokwesibonelo), kanye nekhono lokwenza ukuqinisekiswa okujulile okuhlanganisa ukudlula okuningi, ukuqinisekisa amakheli e-imeyili anezinkinga zesikhashana ezifana nebhokisi leposi ngaphezulu kwe-quota noma ukufakwa kwamafutha. Lo mhlinzeki uphinde aveze i-RESTful imeyili validation API yabathuthukisi be-software kanye nemitapo yolwazi yezilimi ezinkulu zokuhlela nezinkundla ... Futhi banecebo elimahhala eliza nokuqinisekiswa kwamahhala kwe-imeyili okungama-125 ngosuku.
Nov 5, 2015 ngo-7: 07 PM
Siyabonga - singeze uVerifalia ohlwini!
Nov 25, 2015 ngo-4: 56 PM
futhi ngiyabonga ngalokhu okuthunyelwe 🙂
Mar 15, 2016 ku-4: 43 PM
Ngisebenzise ezinye zezincomo kule bhulogi ukukhetha insizakalo yokuqinisekisa uhlu lwe-imeyili. Ngigcine ngokuhamba ne-eemaillistverify.com, kanti ngenkathi ngijabule nabo ohlwini lwami lokuqala, lonke uhlu olulandelayo engiye ngazama ukulusebenzisa enkonzweni yabo lube nenkinga, ikakhulukazi ngoba angikwazi ukulanda uhlu lwabahlanzekile ama-imeyili ngemuva kwalokho. Liyini iphuzu lokusebenzisa insiza yabo uma ngikwazi ukuthola ukuthi yimaphi amakheli e-imeyili avumelekile? Ngaphandle kwalokho, ukwesekwa kwabo akuphenduli kakhulu futhi abaxakekile ngokugcina amakhasimende.
Mar 15, 2016 ku-5: 55 PM
Sibe nenhlanhla enkulu nge-Neverbounce… kangangoba sisebenzisane nabo.
Ngo-Apr 23, i-2016 ku-7: 41 AM
ngifuna insiza yamahhala noma isoftware…. ingabe ikhona?!
Ngo-Apr 23, i-2016 ku-8: i-44 PM
Ngo-Apr 25, i-2016 ku-7: 34 AM
Okuthunyelwe okuhle! Bengimane ngizibuza ukuthi ngingahlanganisa yini insiza enjalo neGetResponse?
Ngo-Apr 25, i-2016 ku-7: i-01 PM
Andrea, ngikholelwa kanjalo. Ngicabanga ukuthi indlela yokukwenza ukuthi ifomu lakho lisebenze ne-API yenkampani yokuqinisekisa. Lapho i-imeyili ibuyisiwe njengoba iqinisekisiwe, lapho-ke ungayicindezela ku-GetResponse.
Jul 9, 2016 ku-1: 21 AM
Ngisebenzisa njengamanje https://www.emailverifierapi.com/ ukuqinisekisa amakheli e-imeyili enkampanini ye-imeyili yenkampani ye-imeyili eshisiwe ye-500. Anginazo izikhalazo njengoba ikhwalithi yensizakalo iphelele, kepha-ke sifuna enye indlela yezindleko eziphansi enikeza ikhwalithi efanayo. Ungasikisela elinye ibanga lebhizinisi elingasetshenziswa? “Ibanga lebhizinisi” ekubeni igama elingukhiye. Ngiyabonga ngosizo lwakho!
Jul 12, 2016 ngo-5: 58 PM
Ngiyethemba, wenza kahle, ukukuvuselela nje, sisebenzisa inqubo yethu yokuqinisekisa i-imeyili.
lapho ungadingi ukuchitha imali yakho eningi. Ngizojabula kakhulu ukukuphendula ngenqubo yethu ukuthi sisebenza kanjani empeleni.
Sithola uhlu oluvela kumakhasimende afuna ukuqinisekisa ama-imeyili, bese sibiza owamukela izihambi noma iMenenja Jikelele yenkampani bese siqoqa ama-imeyili avumelekile,
ngokwenza ngale ndlela ngemuva kwezinsuku eziyi-15 siyayihlola ngenqubo yethu yokuqinisekisa i-imeyili esiyenza e-Eblast.
Uma kukhona umuntu onokudideka noma umbuzo ngalokhu mayelana nezindleko.
Zizwe ukhululekile ukusithumela ngeposi sizobuyela kuwe ngokushesha okukhulu
Okthoba 25, 2016 ngo-8: 26 AM
Ngiyabonga ngale ndatshana! Bengilokhu ngisebenzisa i- proofy.io futhi ngijabule ngayo. Intengo ehlakaniphile ayibizi kakhulu kwabanye futhi ngokuya ngekhwalithi nejubane.
Okthoba 25, 2016 ngo-8: 47 AM
ngiyabonga kakhulu nge-Proofy.io
Dec 2, 2016 ku-4: 37 AM
I-Proofy.io yinkampani yomkhonyovu. Isevisi ayisebenzi. Ngikhokhele amasheke ayi-10000, ngilayishe uhlu lwami lwama-imeyili angama-4000 futhi bekulokhu “Kucubungula” izinsuku ezi-2 ezedlule .. Usizo Olubukhoma kusayithi nayo yonke imininingwane ephathelene nesayithi engingayithola ku-inthanethi, ngeGoogle ihlala ivela endodeni obizwa ngokuthi nguRoman (okungenzeka nokuthi ungumnikazi wesiza) nomngani wakhe u-Anna. Angikutholanga okunye ukubuyekezwa okwethembekile futhi bekungafanele ngibanike imali njengoba sebethule du manje. Basho okuthile mayelana "nohlelo olusebenza kuseva njengamanje" kepha kusukela lapho - akukho ukuxhumana futhi akukho mali ebuyiswayo. UNGAYisebenzisi proofy.io !!!
Dec 20, 2016 ngo-10: 00 PM
Siyabonga ngamathiphu! amathiphu amangalisayo.
Jan 9, 2017 ku-5: 58 AM
Sifuna inkampani enganikeza ngemibhalo evunyelwe ngokusemthethweni yokuthi amakheli e-imeyili aqinisekisiwe avumelekile ngempela futhi ahlolwe.
Uyazi inkampani efana naleyo?
Jan 9, 2017 ku-11: 30 AM
Angiqiniseki ukuthi noma ngubani anganikeza ngesiqinisekiso esisemthethweni njengoba abantu beyeka ukusebenzisa ama-imeyili futhi bashintsha amakheli e-imeyili nsuku zonke. Okungcono kakhulu ipulatifomu elizama ukuthatha izinguquko zamakheli e-imeyili futhi uhlu lwakho lungakhukululwa kulokho.
Jan 11, 2017 ngo-11: 07 PM
"Okuxakayo-ke ngombono wami wukuthi ngikholwa wukuthi kulula ukuthi UMLAWULI afake i-imeyili ebhokisini lakho lokungenayo kunenkampani ejwayelekile ethumela umyalezo ovumelekile."
Cishe uqinisile kulokhu, kepha kungenxa yokuthi amabhizinisi ajwayelekile awasebenzisi kahle ukumaketha kwe-imeyili, noma kaningi ngokwanele ukuze uhlu lwawo lusebenziseke kakhulu nokuthi bafunde izindlela ezinhle kakhulu. Bona (wonke umuntu) kufanele bathumele i-imeyili kaningi.
Kepha mayelana nohlu lwamathuluzi… amangalisayo!
Jan 11, 2017 ngo-11: 09 PM
Sizolandela lokhu okuthunyelwe ngenhlolokhono enkulu ye-podcast ne-CEO ye-Neverbounce, u-Oscar. Hlala ubukele!
Jan 20, 2017 ku-3: 20 AM
Ngicabanga ukuthi ayikho indlela yokuqinisekisa i-imeyili yakho uma i-akhawunti yakho isidaliwe. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kufanele wenze lokhu lapho wenza i-acc yakho esinyathelweni sokuqala.
Mar 28, 2017 ku-11: 55 AM
Indatshana enhle. Ngingazi yini ukuthi uke wayisebenzisa iWebinar ne-CEO ye-Neverbounce, u-Oscar?
Ngo-Apr 24, i-2017 ku-4: i-47 PM
Ngifuna imininingwane ephathelene nokuqinisekisa amakheli e-imeyili ngesikhathi sangempela njengoba ikhasimende elisha liza enkampanini yami. Ingabe leyo software / ubuchwepheshe bukhona kimi ukuthi ngingeze kwisoftware yethu yamanje? Noma ngabe sidinga ukushintsha phezu kwayo yonke isoftware yethu yamanje? Kuhle kakhulu ukuthi sinenkinga yokuthi ithimba lethu lithayiphe amakheli e-imeyili wamakhasimende ngokungalungile noma ikhasimende lenze kanjalo futhi. Ngingathanda ukuyimisa lapho ngithenga khona esikhundleni sokuthi uhlu luhlanzwe bese sibamba nje ikheli elibi le-imeyili esikhundleni sokufinyelela kumakhasimende ethu.
Aug 29, 2017 ngo-12: 24 PM
uma ubheka ukuqinisekiswa kwe-imeyili yesikhathi sangempela, khuluma nabafana ku- emailchecker.com, Nginolwazi lokuqala lokusebenzisa isixazululo sabo sesikhathi sangempela futhi sikhulu futhi sinembile!
Jun 27, 2017 ku-10: 36 PM
Sawubona Douglas, Ukuhlanganiswa okuhle lapho. Nginomuzwa wokuthi uphuthelwe umdlali omkhulu - http://www.emailverifierapp.com Sicela uyihlole. Ngiyabonga
Aug 29, 2017 ngo-12: 22 PM
I-athikili enhle uDoug ifundisa kakhulu futhi eminye imibono emnandi, Sisebenzisa inkampani ehamba phambili futhi sinamakhasi amaningi wokukhama kwiwebhu yonke yamakhasimende futhi siqoqa ama-imeyili ayizinkulungwane ezimbalwa ngosuku! sisebenzise izinkampani ezimbalwa kepha sagcina sibuyele enkampanini yethu yokuqala esayihlola nayo (inkampani ebizwa nge-Email Checker) njengoba kutholakale ukuthi isoftware yayo inembe kakhulu futhi ithembekile. Sisebenzisa i-API yabo emakhasini ethu okukhama futhi iyithuluzi lethu elihle futhi elidume kakhulu kumakhasimende ethu, banikeza ukuqinisekiswa kwenqwaba nokuthi sisebenzisa ifomu elisetshenzisiwe isikhathi nesikhathi kepha sisebenzisa i-API yabo nsuku zonke ngemiphumela emihle. Noma kunjalo bengifuna ukwabelana ngolwazi lwami njengoba ngiyazi ukuthi kunomncintiswano omkhulu laphaya, nikeza abafana ku-imeyilichecker bamemeze iwebhusayithi yabo http://www.emailchecker.com futhi ubatshele ukuthi uJohn Morgan ukuthumele 🙂
I-Oct 15, i-2017 ku-4: i-14 PM
Ngiyajabula ukuthi usho umehluko phakathi kokuqinisekisa nokuqinisekisa. Singangeza i-meilechecker.com ohlwini?
Okthoba 27, 2017 ngo-9: 39 AM
I-Oct 28, i-2018 ku-12: i-53 PM
Nali elinye ithuluzi eliwusizo engifuna ukusikisela: https://debounce.io
Ungangeza lokhu ohlwini lwakho?
Dec 10, 2018 ku-7: 59 AM
Singeze i-DeBounce, ngiyabonga!
Feb 3, 2019 ngo-12: 00 PM
Ufuna ukusikisela uhlelo lokusebenza olulodwa lokuqinisekiswa kwe-imeyili - https://mailcheck.co
Zidlulisela kakhulu kumaphrofayili omphakathi axhunywe kumeyili, kuncane kuma-smtp aqondile. Ivumela ukuthola imininingwane engaphezulu futhi inqume ukuthi umnikazi we-imeyili uyasebenza ku-gravatar, gmail, njll.
Feb 5, 2019 ngo-6: 56 PM
Aug 6, 2019 ku-10: 18 AM
Ngingangeza yini ithuluzi elilodwa elikhulu kulolu hlu?
I-TrueMail (https://truemail.io/) iyithuluzi elihle lokuqinisekisa i-imeyili.
Inembile kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa. Izokuhlanza ngokushesha uhlu lwakho kusuka kumakheli we-imeyili angavumelekile futhi ayingozi.
Ngale ndlela, inokuqinisekiswa kwamahhala kwe-imeyili njalo ngenyanga.
Aug 6, 2019 ngo-1: 07 PM
Ngiyabonga Alona! Ngibangezile kolunye uhlu njengoba befihla izwe labo lokuzalwa futhi idatha yabo ye-whois isethwe yangasese.
May 24, 2020 ku-5: 50 PM
Ungaqinisekisa ama-imeyili ngale nsiza yokuqinisekisa yamahhala: https://www.emailverified.org
Nov 14, 2020 ngo-5: 06 AM
Sawubona Doug, iyathandeka indlela oyigcine ngayo indatshana ivuselelwa eminyakeni embalwa edlule nabahlinzeki bezinsizakalo abasha, ngincoma umzamo. Ngingathanda ukuphakamisa ukuthi i-Antideo ingezwe ohlwini, ingenye yezinsizakalo ezingabizi kakhulu laphaya. I-tier yamahhala enikeza amasheke angaphezu kuka-5000 wokuqinisekisa ngenyanga ingaphezu kwebhizinisi elincane, ngakho-ke singabonga kakhulu uma ungabheka insiza (www.antideo.com) bese usifaka ohlwini lwakho uma ubona kufanelekile.
Nov 18, 2020 ngo-4: 41 PM
Ngiyabonga, sengikufake ohlwini. Inothi elilodwa eliseceleni, kubonakala sengathi isiza senkampani yomzali wakho siphansi.